Connectify Pro 3.6.0.24540...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ Connectify Pro 3.6.0.24540 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Computer ကနေ Wi-Fi လွှင့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်တာပါ...! Update လေးထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ..! အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ...! အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့လင့်က ယူသွားနိုင်ပါတယ်...!
1:Set your desired Hotspot name password.
PRO users can name their hotspot anything they want while Free users must start with
2:Select which internet connection you'd like to share.
Share your the internet connection from your Cable or DSL modem, a3G or 4G moderm,
even another Wi-Fi network.
3:Click Start Hotspot,thats it!
Other Wi-Fi devices such as laptos and smartphones will be able to see and connect to
your hotspot just likeany other access point
" Mediafire..." " Minus..." ( 7.34 MB )
No Response to "Connectify Pro 3.6.0.24540...!"